BASASHA YURUB AYAA SI AAD AH KOR UGU KACAY QIIMAHA - MAQAALLO
Basasha yurub ayaa si aad ah kor ugu kacay qiimaha
Bartamihii Maarso waxay muujinaysaa korodh weyn oo ah farqiga u dhexeeya dalabka iyo keenista basasha ee suuqa Yurub.
Suuqyada Yurub, saadaasha iibka basasha ayaa aad u yaraatay, hadda way yar yahiin waxayna yareyn karaan baahida loo qabo waxyaabahaas, taas oo ay sabab u tahay yaraanta dalal badan. Khubarada ayaa ugu yeeraya heerka sahayda baska ee adduunka hooseysa. Tani waxaa lagu sheegay Patrick Flin, Madaxa Paris Ail, oo takhasuskiisu yahay bixinta basasha, toonta iyo baradhada.
Eeg sidoo kale:
Beereyta Hindiya ayaa burburisay roobab aan caadi ahayn
Isticmaalka basasha: faa'iidooyinka iyo waxyeellada caafimaadka
Sida laga soo xigtay Flin, rajada suuqa Yurub ayaa weli ka dhoofisa wadamada koonfurta koonfureed, laakiin dib-u-dhiska dhamaystiran ee isu-dheellitirka dalabka iyo baahida lama filaan ah. Dhibaatada basasha ee Europe ah lagama yaabo in lagu daboolo soo dejinta, xitaa marka la tixgeliyo kororka mugga heerarkooda toddobaadyada soo socda. Sida laga soo xigtay khubarada, qiimaha basbeelka bilaha guga wuxuu ku sii jirayaa heer aad u sarreeya.
Waxaa intaa dheer, waxaa jira fursada ah in Nederland, iyada oo tixraacaysa siyaasaddooda ugu weyn ee sii dheeraynaya sahayda basasha, xaaladda ayaa xoogaa xasilloonaan doonta. Sida laga soo xigtay Flin, Faransiiska iyo Spain ayaa sidoo kale leh kaydka basasha, taas oo saameyn ku yeelan karta suuqa. Laakiin weli yaraanta alaabooyinka ayaa weli, taas oo macnaheedu yahay sii wadida sii socota ee koritaanka qiimaha basasha ee Europe.
Liiska cusub ee badeecadaha la mamnuucay soo dejinta Ruushka ayaa lagu dhawaaqay.
Goobta Rivne waxay abuuri doontaa bulsho leh wax ka qabashada alaabooyinka deegaanka